FAQs - Shenzhen Herbin Ice Systems Co, Ltd.
Nei yako flake echando michina iri yakawanda-simba-yekuponesa kupfuura mamwe maChinese flake echando michina?
Isu taishandisa sirivha alloy kugadzira iyo flake chando evaporator. Iyi nyowani patentiki yezvinhu ine yakanakisa kupisa kupisa. Iko kupisa kupisa pakati pemvura uye firiji kunogona kuitiswa zvakanyanya, saka, kugadzirwa kwechando kuri kuita kuve kwakanyanya kushanda, uye mashoma simba firiji inodiwa.
Iwo masisitimu 'ekupisa tembiricha anotenderwa kuve akakwirira, senge -18C. Mvura inogona kunyatsoomeswa nechando neiyi tembiricha iri kubuda, nepo mamwe makambani eChinese achifanirwa kugadzira masisitimu avo ne -22C kupisa kwemhepo.
Simba-kuchengetedza = Electricity bhiri yekuponesa.
Imwe chete 20T / zuva flake chando muchina inogona kukubatsira iwe kuchengetedza kusvika kumadhora mazana matanhatu emadhora mazana maviri emakore makumi maviri. Isu tinoverenga magetsi pamutengo weUS $ 14 pa100KWH.
Zvekuchengetedza magetsi, iwe unoshandisa zvinhu zvitsva kugadzira iyo evaporator. Chinyorwa chitsva ichocho chine nguva yakareba yebasa here?
Iyo sirivheri chiwanikwa chakagadzirwa nezvakawanda zvinongedzo, uye iyo yakapetwa ka2 yakasimba kupfuura yechinyakare kabhoni simbi.
Mushure mekurapa kwekupisa, evaporator vane zvitsva zvinhu havazove nekushomeka kwehupenyu kwenguva yakareba. Isu takahaya timu yehunyanzvi kuti tiite bvunzo yakakwana muZhangjiang Ocean University. Uye isu takaedza ichi chinhu nemichina inodarika 1000 mumusika kwemakore mashanu.
Yakawanda sei kune yako chando muchina
A: Tichataura zvichibva pane zvinodiwa nevatengi.
Saka mutengi anofanira kutipa ruzivo runotevera kuti tikwanise kutaura nezvazvo.
1.Rudzii rwechando rwekugadzira? Flake chando, chubhu chando, block ice, kana zvimwe?
2.Mazana matani echando anoita zuva nezuva, mukati memaawa makumi maviri nemana?
3. Chii chichava kushandiswa kukuru kwechando? Nekuomesa hove, kana zvimwe?
4.Ndiudze chirongwa chako nezve bhizimusi rechando, saka tichakupa mhinduro yakanakisa zvichibva pane zvaunoona.